Rehefa Avy Nanao Fampielezankevitra Momba ny Fahalalahan’ny Aterineto, Dedaka Amin’ny Fanivànana Aterineto Ny Minisitra Iraniana Misahana Ny TIC · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jona 2017 5:15 GMT
Ny filoha lefitra ankehitriny aza, Eshaq Jahangiri, izay nihazakazaka nanao ny ankamaroan'ny fampielezankevitra tamin'ny fifidianana, toy ny hoe kandidà ho filoha “mpisolo toerana” sy “mpiara-mihazakazaka” (efa noahiahiana ihany hoe hiala an-daharana izy ary hanohana an'i Rouhani amin'ny minitra farany, ary dia izay no nataony), dia nizotra tamin'ny fanaovana izay fara-heriny hiarovana ny fanolorantenan'ny governemantan'i Rouhani hanome fahalalahana ny aterineto. Ilaina marihana ny hoe, maro amin'ny fototra niaingàn'i Jahangiri no nahitàna ireo mpandàla fihavaozana tao amin'ny firenena, mazàna maneho ny amin'ireo soatoavina momba ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahafahana mahazo vaovao.
Notohizany tamin'ny famaritana ny fomba fiasan'ireo Iraniàna manampahefana miaraka amin'ny Telegram mba hamoronana habaka iray azo antoka ho amin'ny tombontsoa hiadiana amin'ny fanararaotana ara-nofo, ny fanararaotana ankizy, ny ‘herisetra’, ny ‘fampihorohoroana’ ary ny ‘votoaty manohitra ny finoana’. Tsara marihana fa efa tany amboalohany ny Telegram no nandà fiarahana miasa amin'ny governemanta Iraniàna, afa-tsy ny fibahanana ireo votoaty vetaveta hita fa tsy mendrika any amin'ireo mpaninjara toy ny App Store an'i Apple.
Tsy nanazava izay antony mbola itohizan'ny sivana mihanaka be ao Iràna ingahy minisitra, no sady tsy nanondro izay sehatra tena nokendrena tamin'ilay lazainy ho “fanatsaràna voalanja am-piheverana”. Tany aloha ilay minisitra dia nanamarika dingana azo heverina ho nitovitovy amin'io, “fitantavànana am-piheverana,” izay fantatra fa tao amin'ny Instagram ihany no nampidirina.